University of Tasmania - Baro Overseas ee Australia
gaabinta : SOCDO
aasaasay : 1846
Ardayda (qiyaastii.) : 34000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University of Tasmania
Qor at University of Tasmania
The University of Tasmania (SOCDO) waa jaamacad cilmi dadweynaha ugu horrayn ku yaalla Tasmania, Australia. Si rasmi ah la asaasay 1890, waxaa la jaamacad afaraad in la aasaaso ee Australia, inkastoo College Masiix, noqday oo xiriir la leh jaamacadaha ee 1929, waxaa la aasaasay sannadkii 1846 oo weli foomka ugu da'da weyn ee waxbarashada sare ee dalka. The University of Tasmania waa jaamacad sandstone iyo waa xubin ka mid ah ururka caalamiga ah ee Jaamacadaha Commonwealth iyo theAssociation ee koonfur bari Asia Hay'adaha Waxbarashada Sare.
Jaamacadda waxay bixisaa barnaamijyo undergraduate iyo qalin kala duwan oo kala duwan oo nidaamo, oo xiriir la leh 20 machadyada cilmi takhasus, xarumaha cilmi-baarista iskaashi iyo xarumaha cilmi-baarista ku salaysan awood; kuwaas oo qaar badan lagu tiriyaa sida dalka iyo madaxda caalamka ee tartan rasmi ah. Machadka jaamacadda ee Marine iyo Antarctic Daraasado ayaa si xoog leh gacan ka badan ee jaamacadda 5 dhibcaha rating (sidoo kale kor ku xusan heerka adduunka) fiican in cilmi abaal by Golaha Cilmi baarista Australiya. Jaamacadda ayaa sidoo kale ka samatabbixiyaa waxbarashada sare ee Maritime College Australian, xarunta qaranka ee waxbarashada badda, tababar iyo cilmi.
Jaamacadda si weyn loo arkaa in ay go'an tahay in ay heer sare ee barashada iyo baridda. Waxaa la kaalinta in hogaanka 10 jaamacadaha cilmi ee Australia iyo laba boqolkiiba ee jaamacadaha adduunka oo dhan ee darajayn ee Academic of Jaamacadaha Adduunka. Jaamacada ayaa sidoo kale helay abaalmarinta dheeraad ah cilmiga badan kasta oo jaamacad kale ee Australian by Xafiiska Dawlada Australiya Learning iyo Teaching in 2012.
Waxbarashada at the University of Tasmania sii badan aad la filayaa waxaad qaadan kartaa. Our kala duwan kala duwan ee degrees, dhaafsi ardayga iyo waayo-aragnimada waxbarashada waxaa loogu talagalay in ay qaabeeyaan madaxda caalamka mustaqbalka.
The University of aragnimo Tasmania sidani oo iman kara ee shakhsiyaadka. qalin lagu qalabaysan oo ku dhiiraday in uu qaabeeyo iyo wax ka qabashada fursadaha iyo caqabadaha mustaqbalka sida dhammaado ula xiriira, heer sare ah loo arkaa xirfad iyo muwaadiniinta dhaqan awoodda maxalliga ah, qaran, iyo bulshada caalamka.
sano Your jaamacad ma aha kuwa xaqa ah oo ku saabsan daraasadda, ha noqon daacad ah. Waxaad u baahan tahay dheelitirka u dhexeeya shaqo adag oo badan oo play. Oo Tasmania waa garoon ku fiican. In jasiirad, waxaan ku hareereysan biyaha. Ka fikir yachts, kayaking, dabaasha iyo fankooda.
Waxaan leenahay cidlada more Reserved badan meel kasta oo kale oo caalamka - waana xaq on marinkeeda ee magaalooyinkeenna. tug, baskiillada buuraha, fuulitaanka iyo teendhaysiga yihiin galabtii ama maalmaha fasaxa hawl fudud. Oo waxaynu haysannaa xoolaha halkan in si fudud aan ka jirin meel kale oo adduunka ah. Meeshu waa sanayd iyo arrin si fudud, qurux badan.
Laakiin haddii magaaladan waa ka style aad, Tasmania ayaa kugu daboolay. Our cuntada, farshaxanka iyo dhaqanka goobta waa mawduuc kulul mags dalxiiska ceshay. Sababtan wanaagsan. Waxaannu abaalmarinta ku guuleystay ciidaha sannadka, waddooyinka cajiib ah, iyo dhaqanka makhaayad in marnaba istaago.
Waxa ugu fiican waa, dhawaanshaha ugu dhow ee Uni in ay drawcards badan Tasmania ee u ogolaanaya waqti dheeraad ah si aad u hesho waxa ka mid ah. Oh - oo aan heysano hawada ugu nadiifsan adduunka ... fiican ee habeenka weyn buunankay iska cobwebs ah (buugaagta qoraalka).
Beeraha & Environmental Science
Kombuyuutarada & IT
Waxbarasho & Teaching
Sciences Caafimaadka & Daryeelka bulshada
Music, Creative & Farshaxanka
The University of Tasmania ayaa la aasaasay oo ku saabsan 1 January 1890, ka dib markii la baabiiyo of scholarships dibada sii daayey ilaa lacagaha. Waxaa isla markiiba la wareegay doorka Golaha Tasmanian Waxbarashada. Richard Harris Deodatus Poulett, kuwaas oo muddo dheer ku dooday in la aasaaso Jaamacadda, noqday ay ilaaliye koowaad ee duqowdii. The degrees ugu horeeyay ee ka qalin qirtay at xawaaraha isku mid ah; iyo shahaadooyinka la siiyay ee June 1890. Jaamacadda waxaa lagu bixiyey dhismaha ah sandstone ornate on Domain Queens ee Hobart, hore Dugsiga Sare ee Hobart, inkasta oo waxaa la ijaaray dad kale ilaa bartamihii 1892-. Waxa uu noqday kuwa loo yaqaan University House. Saddex macalimiinta bilaabay barayay ardayda kow iyo toban ka 22 March 1893, mar University House ayaa la dayactiray. Xildhibaano u tilmaamay raaxada ah oo aan loo baahnayn ka dhigay jiritaanka hore ee jaamacadda ee aan sugnayn. dhiirigelin hay'ad ardayda dumar shiday dhaleeceyn. James Backhouse Walker, qareen maxalliga ah iyo si kooban ku-xigeenka Chancellor, dhajinta difaac u dhiirranow. By dagaalkii koowaad ee aduunka waxaa ku jiray in ka badan boqol arday iyo dhowr ka qalin Tasmanian ahaayeen wax raadayn kara sharciga iyo siyaasadda.
Sida laga soo xigtay Chancellor Sir John Morris, ka 1918 ilaa 1939 hay'adda weli 'laga saaray ay weheliyaan'. shaqaalaha sharafta mar hore loo magacaabay, sida taariikhyahan William Yetroo Brown, physicists iyo xisaabyahannada Alexander McAulay iyo wiilkiisii ​​Alexander Leicester McAulay, classicist RL Dunbabin, iyo falsafo iyo polymath Edmund Morris Miller. Yaaliin ee Dugsiga Sare ee hore ee Hobart, hiilaadka ayaa gebi ahaanba weynaaday, laakiin dawladda gobolka ahaa mid gaabis ah si ay u maal campus cusub.
In 1914 jaamacadda ka codsaday King George V waayo, Waraaqaha Xaqsiinta, taas oo ka codsan uu siiyey. Macay Warqadaha The, mararka qaarkood loo yaqaan Royal Charter, siiyay oggalaansho shahaadooyinka jaamacadeed ee sida u dhiganta jaamacadaha aasaasay of United Kingdom, halkaas oo u dhigma sida jiraye.
Inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, halka Annexe indhaha dhufays ka caawiyay dadaalka dagaalka, qalin degaanka, bedelay tacliinta askari, baray haystaa sacab muggiis oo ardayda. Shaqaalaha New post-dagaal, badan oo waayo-aragnimo dibada, cadaadisay qaadidda xarumaha ku filan ee Sandy Bay on kala duwan oo qoriga jir. Chancellor Sir John Morris, Waxa kale oo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, in kastoo reformer firfircoon, aqoonyahano antagonized uu talisnimo. -Xigeenka Chancellor Torliev Hytten, dhaqaaleyahan qudbad, arkay peak dood halka ku dhaqaaqa in Sandy Bay ayaa dib. Warqad uu dareen u furan Premier, Falsafadda Professor Sydney Orr qaadilahaa xukuumadda galay dhismaha 1955 Royal Commission galay jaamacadda. Warbixinta guddiga ayaa dalbaday in dib u habayn balaaran ee golaha sare ee jaamacadu iyo maamul labadaba. Shaqaalaha ahaayeen faraxsanahay, halka maamulka ku jiifay isagoo careysan.
The 1965 Martin Report aasaasay door dhaqanka jaamacadaha, oo kaalin ka badan wax ku ool ah, waayo, kulliyadaha waxbarashada sare. Dawladdu waxay Tasmanian taaghayn abuuray College ee Tasmanian of Education Advanced (TCAE) in 1966 Qaylodhaanta Buur Nelson kor jaamacadda. Waxaa markii hore lagu daro The School of Art, ka Conservatorium of Music iyo Hobart Macalimiinta College ee. In 1971, campus Launceston ah TCAE lagu dhawaaqay. Kuwaasu waxay ahaayeen go'aamo khaas ah, sida dhacdooyinka sanadihii la soo dhaafay soo socda tusay. Waxaa lagu dooday in TCAE ah isku dayeen in ay la tartamaan jaamacadda, ma waxaa la dhamaystiro.
In 1978 Jaamacadda Tasmania wareegay labo ka mid ah koorsooyinka ay bixiyaan TCAE ee Hobart, Farmashiyaha iyo sahan, ka dib markii warbixin uu soo saaray Professor Karmel, iyo mid kale oo ay H.E. Cosgrove. Qaar ka mid ah koorsooyinka kale TCAE in Hobart dhaqaaqay Launceston. Xaaladda daabaca ah oo saddex saf oo kala duwan ee waxbarashada macallimiinta ee Gobolka ma sii socon karo, si kastaba ha ahaatee, iyo soo socda laba warbixinood oo dheeraad ah, Jaamacada daro koorsooyinka ka haray campus Hobart reer College of Education Advanced in 1981, oo kiciyey tirooyinka ay 5000. campus Launceston ee TCAE laftiisa baxshay Machadka Tasmanian State of Technology (taagan).
In 1987, Golaha Jaamacadda xalin u dhawaadaan TSIT inay la gasho wadaxaajood ku biirto ah in minmise ka socdaan dagaallo. The 'Dawkins Revolution’ iyo 'midaysan nidaamka qaranka’ siiyaa taageero dambe initiative this. Machadka State Tasmanian The of Technology noqday Campus Newnham ee jaamacadda on 1 January 1991, dhab ahaan 101 sano ka dib markii la aasaasay jaamacadda ee. campus cusub ee Burnie on the North-West Coast of Tasmania ayaa la furay 1995, oo markii dambe u noqday yaqaan Campus Cradle Coast. In kastoo hay'adda fujiyo ceshan magaca jir ah oo University of Tasmania, sida hay'adaha kale ee casriga ah marxalad cusub heysatay ciidamada suuqa halkii ay maalgelinta dawladda deeqsi ah gacanta ku hayso ay mustaqbalka.
Australian Maritime College The (AMC), xaaladda ku xiga si ay campus Newnham ah, dhexgeliyey jaamacadda ee 2008. The University of Tasmania iyo TasTAFE hadda waa hay'adaha keliya ee waxbarashada sare ee Tasmania.
Ma rabtaa wada hadlaan University of Tasmania ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University of Tasmania rasmiga ah Facebook
University of dib u eegista Tasmania
Ku biir si ay ugala hadlaan of University of Tasmania.